နားခိုရာ: August 2008
Posted by little moon at 8:42 AM4comments:
Posted by little moon at 1:08 PM No comments:
နေ့လည်က MS Sharepoint server installer ယူဖို့ မောင်လှရုံးရောက်လာရင်း သတင်းပေးသွားတယ်။ D90 ထွက်နေပြီတဲ့။ ကင်မရာလေး တစ်လုံးလောက်ဝယ်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေတာကြာလှပေါ့။ လိုချင်တာကလဲ Nikon DSLR Series ထဲက တစ်ခုခုပေါ့။ ၀ယ်မယ်ကြံလိုက် ဖွတ်ဂလိ ဒင်္ဂါးလေးတွေကို တွက်ဆလိုက်နဲ့ ၀ယ်တဲ့ဆီကို မရောက်သေးပါဘူး။
အခုလဲ Nikon site ၀င်ပြီး D90 ပုံလေးတွေ Brochure တွေ download လုပ်ယူတာပေါ့။ :)
12.3 Migapixcel ဗျ။ ထူးခြားလာတာတစ်ခုက D-Movie Mode—Cinematic 24fps HD with sound ဆိုတဲ့ feature တစ်ခုပါလာတယ်။ Video ပါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့။ DSLR တွေမှာ အဲဒီ feature ပါလာတာ D90 က ပထမဆုံးပဲ။ Body only ကို USD 1000 ဗျ။ ကိုယ်မ၀ယ်နိုင်သေးလဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ၀ယ်ဖို့ မြှောက်ပေးလိုက်ဦးမယ်။
Posted by little moon at 2:49 PM No comments:
မနေ့ညနေ သူအိပ်ယာက ထကာစ အချိန်လေးမှာ ရိုက်ထားတာ မှောင်နေတာရယ် လက်မငြိမ်တာရယ် သူလှုပ်နေလို့ ခပ်မြန်မြန်ရိုက်လိုက်ရတာရယ် Handphone နဲ့ ရိုက်တာရယ်တို့ကြောင့် ပုံ quality တော့ သိပ်မကောင်းဘူး။
သားလေးကို ပုံကောင်းကောင်း လှလှလေးတွေ ရိုက်ပေးဖို့ မန္တလေးက ရုပ်ဆိုးဆိုး ဓါတ်ပုံဆရာတွေကို ခေါ်ရိုက်ခိုင်းရမယ် :P
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့မှာ hit rate သိသိသာသာ တက်သွားတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို တွေ့ပါပြီ။ Leryn Franco ဆိုတဲ့ Paraguay က javelin thrower အားကစားမယ်လေးကြောင့်ပါ။ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတစ်လျောက်မှာ ရုပ်ရည်ကြောင့် hot and sexy girl ဆိုပြီး နံမည်ကြီးနေတာပါ။ ကျွန်တော်က အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောင်မလေးပုံ လှလှလေးတွေ တွေ့ရင် (ဒေါ်ခင်ဦးမေ ရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်) တိုတတ်တယ်။
တစ်နေ့က ဒီ Leryn Franco ရဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံတင်ထား မိပါတယ် search engine တွေကနေ Leryn Francoq ဆိုတဲ့ key word နဲ့ ရောက်လာ ကြတာကိုး ... hit ၆၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ ဘာကြောင့် hit တက်လာလဲစဉ်းစားနေတာ ညီမငယ် Dawn ရဲ့ အကြံပေးမှုနဲ့ search engine ကလာတဲ့ key word တွေလိုက်ကြည့်မှ အဖြေတွေ့သွားတယ်။ ပုံမှန် hitကလည်း ဒီနှစ်ရက်မှာ တစ်ရက်ကို ၂၀၀ကျော်လောက် ဖြစ်သွားတော့ hit တွေတက်သွားတာပေါ့။ Nativemyamar က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အခြား ပြည်ပက မိတ်ဆွေတွေ သားလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံ ၀င်ကြည့်ကြတာဖြစ်မယ်။
ဒါနဲ့ internet ပေါ် လျှောက်ကြည့် ရင်း သဘောကျတဲ့ Leryn Franco ရဲ့ လှတပတ ပုံလေးနှစ်ပုံ ထပ်တိုလာတယ်။ :D
Posted by little moon at 5:36 PM 1 comment:
Posted by little moon at 3:10 PM No comments:
Posted by little moon at 12:29 PM 1 comment:
Posted by little moon at 3:52 PM No comments:
ပန်းပြိုင်မလို့ ထွက်လာကြသလား မသိဘူး။
လှေကလေးတွေ ရွက်လွှင့်နေမှာပဲ" လို့။
အိပ်မက် တောင်းကြီးတွေ တင်ပြီး
Posted by little moon at 12:20 PM No comments:
ပထမဆုံး ခူးခဲ့သော စပယ်ဦးတို့ကို
ပထမဆုံး ခူးခဲ့သော စပယ်ဦးတို့ကိုကား
တဂိုး (ပြန်ဆိုသူ မင်းသုဝဏ်)
Posted by little moon at 12:09 PM No comments:
Posted by little moon at 10:00 AM No comments:
Posted by little moon at 1:48 PM 1 comment:
Posted by little moon at 6:47 PM 1 comment:
Posted by little moon at 5:40 PM No comments:
ကမ္ဘာ့ဖလားကို ငါးထပ်ကွမ်းရထားတဲ့ ဘောလုံးဘိုးအေကြီး ဘရာဇီးအသင်းရဲ့ ခွက်ခွက်လန် ရှုံးပွဲပါ။ မရဖူး သေးတဲ့ အိုလံပစ် ရွှေတံဆိပ်လေးကို ဒီနှစ်မှာ ရယူမယ်ဆိုတဲ့ အိမ်မက်လေးလဲ တစ်စစီ ကျိုးပဲ့ကြွေလို့ အေးချမ်းမေ ဖြစ်သွားရပါပြီ။ ရှုံးမဲ မဲပြီး လူချကစားသလို ဖြစ်ကာ ကစားသမား နှစ်ယောက် တိုက်ရိုက် အနီကဒ် ပြခံရတာတော့ အတော့်ကို ရုပ်ဆိုးလှပါတယ်။ ပွဲစကတည်းက အာဂျင်တီးနားက ခြေသာပါတယ်။ ရေကွယ်မီး ဦဆောင်တဲ့ ကွင်းလယ်နဲ့ မက်ဆီ ပါတဲ့ တိုက်စစ်ကို ဘရာဇီးတို့ အလူးအလဲကစားခဲ့ရတာပါ။ ရိုနယ်ဒင်ဟို တစ်ယောက်လဲ သတိပြုမိလောက်တဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မန်နေဂျာ ဇစ်ကိုအတွက်လဲ မျက်နှာပန်းမလှတဲ့ ပွဲတစ်ခုပေါ့။
MRTV4 ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Argentian Crazy ဆိုတော့ အတော့်ကို ၀မ်းသာနေပါတယ်။ Nigera နဲ့ကစားရမဲ့ Final ပွဲကလည်း အကျိတ်အနယ် ကြည့်ကောင်းမဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
Posted by little moon at 12:15 PM No comments:
Posted by little moon at 1:35 PM4comments:
Posted by little moon at 8:53 PM No comments:
Posted by little moon at 1:35 PM No comments:
နှစ်စဉ် ၀ါခေါင်လကို ရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ မိတ်သင်္ဂဟတစ်စုတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာ ဒီလို ၀ါခေါင်ကန်တော့ပွဲလေး လုပ်တာ ကျွန်တော့်တစ်သက်နီးပါးလောက်ရှိပါပြီ။ ဂိုဏ်း ဂဏတွေ နတ်တင်တာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ (၁၀)ဌာန ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပန်း၊ ရေချမ်း၊ဆီမီး၊ဆွမ်းတို့နဲ့ ကပ်လှူတယ်။ (ဂ)ဌာန ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပန်း၊ ရေချမ်း၊ဆီမီး၊ဆွမ်း .. သူတို့ကိုယ်တိုင် ဘုရားကို ကပ်လှူဖို့ ပင့်ဖိတ်ပြီး လှူပေးတယ်။ ပန်းဆိုတာ အရဟံအောင်လံစိုက်ထားတဲ့ အောင်သပြေပန်းတွေပါ။ ပြီးတော့ (၈)ဌာန ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရေချမ်း၊ဆွမ်း ကော်ဖီအချိုရည် စသည်ဖြင့် လှူပေးတယ်။
၀ါခေါင်လဆန်း ၁၂ရက်ညနေဖက်မှာ (၈)ဌာန ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လက်ဖက်ပွဲ သောက်တော်ရေနဲ့ ပင့်ပါတယ်။ လဆန်း ၁၃။ ၁၄ နဲ့ လပြည့် သုံးရက်တိုင်တိုင် အာရုံဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ သားသတ်လွတ်ပါ။ ထောပတ်ထမင်း၊ အုန်းထမင်း၊ သစ်သီး ဒန်ပေါက်.. စတာတွေလှူနိုင်ပြီး သစ်သီးများလဲထည့်နိုင်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်အားလုံး သားသတ်လွတ်စားရပါတယ်။ အရဟံကိုပွားများကြရပါတယ်။ မေတ္တာပို့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးများ လပြည့်နေ့မှာ ဥပုတ်စောင့်ရပါတယ်။
ဆောင်ရွက်ပုံအသေးစိတ်ကို အားတဲ့အချိန်ရေးပြီး မှတ်တမ်းအဖြစ် တင်ထားပါဦးမယ်။
ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ (၁၀)ဌာနက ၉ နဲ့ ၁၀ ကို နောက်တစ်ဆင့် အသေးစိတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ ဆယ်ဌာနလိုတော့ နေ့စဉ်အိမ်မှာအမြဲလှူတန်းဆက်ကပ်ဖို့ထက် ခါကြီးရက်ကြီး၊ မွေးနေ့၊ မင်္ဂလာရက်၊ အိမ်တက် စတဲ့အချိန်တွေမှာ ပင့်ဖိတ်လှူတန်းတာများပါတယ်။ လှူတန်းပုံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
- ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကပ်လှူနိုင်ရင် လှူတန်း ပေးခြင်း။ (သူတို့ စားသုံးရန် လှူတန်းခြင်းမျိုးမဟုတ်။ သူတို့က ဘုရားကို လှူရန် ပေးလှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
- ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များကို တိုက်ရိုက် ဧည့်ခံလှူတန်းခြင်း
(၁) အလုံးစုံသော ရဟန်းဝိဇ္ဇာထိုရ် ဆရာတော်အပေါင်း (ဥပမာ ဘားမဲ့၊ ယက္ကန်းစင်တောင်၊ ရှင်မထီး ...)
(၂) အလုံးစုံသော နတ်ဝိဇ္ဇာထိုရ် ဆရာတော်အပေါင်း
(၃) အလုံးစုံသော လူဝိဇ္ဇာထိုရ် ဆရာတော်အပေါင်း (ဥမာ ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်....)
(၄) ၀ိဇ္ဇာဇော်ဂျီ ဆရာတော်အပေါင်း
(၅) ဘိုးတော်သကြားမင်းနှင့် သာသနာစောင့် နတ်မင်းအပေါင်း
(၆) သူရဿရီမယ်တော်ကြီးနှင့် ဒေ၀ီမယ်တော်အပေါင်း
(၇) ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မာစိုး၊ အာကာသစိုး နတ်မင်းအပေါင်း
(၈) စင်္ကြာဝဠာ အနန္တရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နတ်မင်းအပေါင်း
Posted by little moon at 1:20 PM No comments:
Posted by little moon at 12:53 PM No comments:
ဒီမနက် ၉နာရီကျော်လောက် ဆေးရုံကဆင်းဖြစ်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အထုပ်အပိုးတွေ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရှုပ်ပွ ပြီး ၀ုန်းဒိုင်းကို ကြဲနေတာပဲ။ အဓိကတော့ ကလေးနေသာအောင် နေရာချရတာပေါ့။ တော်သေးလို့ Nurse ဆရာမလေး ကို အိမ်ခေါ်လာလို့။ ကိုယ်တွေက အိမ်ရှင်း နေရာချ ပစ္စည်းတွေသိမ်းနေချိန် ကလေးကို ဆရာမလေးက ကြည့်ပေးထာရတာပေါ့။ သားသား ပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်တွေကို မနည်းဘူး။ နောက်ရက်တွေကြရင် night nurse ဆရာမလေးကို တစ်ပါတ်လောက် ဆက်ပြီး ခေါ်ထားတယ်။ အိမ်မှာ အထာ မကျခင် သားသား သက်တောင့်သက်သာနဲ့ နေသာထိုင်သာ ရှိအောင်ပေါ့။ လိုတဲ့ အသုံးအဆောင်လေးတွေ ထွက်ဝယ်ရဦးမယ်။
သားကို သောကြာနေ့မှ ကလေးဆေးရုံခေါ်သွားပြီး BCG ထိုးရင်း ကလေးအထူးကုနဲ့ ထပ်ပြရမယ်။ ကလေးအမေကတော့ ချုပ်ရိုးပလတ်စတာခွာပြီး လာမဲ့ တနင်္ဂနွေမှာ OG ကို သွားထပ်ပြရမယ်။ လောလောဆယ်တော့ အိမ်မှာ ယောက်ခမ လာနေပေးမယ်။ တောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းဖို့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်လဲ ခေါ်ထားတယ်လေ။ ဖြေးဖြေးတော့ သားလေး အိမ်မှာ အသားကျသွားမှာပါ။
Posted by little moon at 11:24 AM2comments:
Posted by little moon at 10:23 AM3comments:
Posted by little moon at 2:33 PM3comments:
Posted by little moon at 11:17 AM 16 comments:
မနှစ်က ဘောလုံးရာသီမှာ Arsenal လူငယ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး Emirate Cup ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ်နှစ်ခုလုံးမှာ ဘယ်တောင်ပံနေရာကနေ ပရိသတ်အများ သတိပြုမိသည်အထိ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး Jack Welshere ကို ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီအတွက် First Team ကို ခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။ Giberto Silver ရဲ့ No. 19 ကို ၀တ်ဆင်ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ သူဟာ အသက်၁၆နှစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက်(၁၇)နှစ်မွေးနေ့ ပြီးရင် Arsenal က Professional Contract ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by little moon at 4:22 PM No comments:
တိမ်စစ်သည်တို့ကို စုရုံး၍ မရသော မိုးနတ်သားသည် ခြိမ်းခြောက် ဟိန်းဟောက်သံကိုသာ ပေးနေရတော့၏။ လေနတ်မောင်၏ ရယ်မောသံကား မခံချိ မခံသာ ဖြစ်စရာပင်။
ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးတွင် လေနတ်မောင်၏ ခြေရာလက်ရာ မြူမှုန် ဗရပ္ပသာ တွေ့ရ၏။ မိုးနတ်သားသည် ဤ မြူမှုန်ညစ်ပြာတို့ကို စင်စစ် ဆေးကြောချင်လှ၏။ သို့ရာတွင် သူ့တပ်သားတို့ကား ဖရိုဖရဲ ပြိုကွဲလလျက် ရှိခြေပြီ။
ရံဖန်ရံခါ ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ တိမ်ဖြူလွလွတို့ကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါ၏။ လူ့လောကကို အေးမြစေလိုသော စေတနာ မွေး၍ မိုးသေး မိုးဖွဲ မိုးကျဲကျဲကို ရွာချနိုင်ပါ၏။ သို့သော် လေနတ်မောင်က ခြေထိုးလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကစဉ့်ကလျား ပြေးလွှားကုန်ကြတော့၏။ သွေးလေချောက်ချား တပ်ပျက်ကုန်ကြတော့၏။
မိုးနတ်သားသည် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်၏။ လေနတ်မောင် အဖျက်ဒဏ်ကို မည်သို့ ကြံ့ကြံ့ခံရမည်ကို စနစ်တကျ စီမံ၏။ တိမ်စစ်သည်တို့အား မည်သို့ နားချရမည်ကို စဉ်းစား၏။
လောကတစ်ခွင် လေနတ်မောင် အဖျက်သမားသာ အစိုးမိုးခံရလျှင် သစ်ပင်ပန်းမန် လူတိရိစ္ဆာန်တို့ ခိုကိုးရာ မဲ့ချေတော့အံဟူသော မိုးနတ်သား၏ စေတနာသည် တိုက်ပွဲအောင်မည့် အကောင်းဆုံးလက်နက် ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။
Posted by little moon at 5:48 PM 1 comment:
Posted by little moon at 5:35 PM No comments:
Posted by little moon at 8:47 AM No comments:
ဒီပွဲမှာ Arsene Winger ကြီးက သူ့ရဲ့ ချာတိတ် ကလေးတွေကို အများကြီး ထုတ်သုံး သွားတယ်။ နောက်တန်းမှာ ဘယ်အစွန်က Clichy ရဲ့နေရာမှာ Kieran Gibbs ဆိုတဲ့ ကောင်လေး၊ ညာဖက်မှာ Hoyte ဗဟိုခံစစ်နေရာမှာ Senderos နဲ့ Djourou ကိုသုံးထားတယ်။ အောင်မယ် ... Senderos က Captain လက်ပတ်နဲ့ဗျ။
အလယ်တန်း ဘယ်အစွန်မှာ Jack Wilshere ဆိုတဲ့ကောင်လေး ပွဲထွက်တယ်။ ညာအစွန်မှာ Eboue နဲ့ ကွင်းလယ်က ဘရာဇီးသားလေး Denilson နဲ့ Ramsay ကို ၀င်ကစားတယ်။ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်အနေနဲ့ လူသစ်Carlos Vela ကို Bendtner နဲ့တွဲပေးထားတယ်။
လူငယ်တွေအများစုပါဝင်နေပေမဲ့ အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ Juventus ကို သူတင်ကိုယ်တင် ယှဉ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆုံးသတ် Finishing ပိုင်းမှာ အားနည်းနေလို့ ဂိုးမရခဲ့ဘူး။ လူငယ်တွေ အရည်အသွေးကောင်းပေမဲ့ အတွေ့အကြုံလိုနေသေးတယ်။ Juventus က Trezeguet ရဲ့လူကျွံဘောအနေအထားက သွင်းယူသွားတဲ့ ဂိုးနဲ့ ပထမပိုင်းမှာဦးဆောင်နေတယ်။
ဒုတိယပိုင်းအစမှာ Vela အစား Adebayer Hoyte အစား Gallas နဲ့ Ramsay အစား Diaby ၀င်ကစားတယ်။ Adebayer ကြီးကစားနေတာ စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ ခြေမပေါ်ဘူး။ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာနဲ့ အပေးအယူ တွဲလုံးလေးတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုးတွေ Juventus ရဲ့နောက်တန်းကို သိပ်မခြိမ်းခြောက် နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဂိုးသမား Buffon တောင် သိပ်မဖမ်းလိုက်ရဘူး။ ဒုတိယပိုင်း တစ်ဝက်ကျော် လောက်မှာ Segana, Nasri, Walcott တို့ဝင်ကစားသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချေပဂိုးတောင် ပြန်မသွင်းနိုင်ပါဘူး။
ဒီပွဲမှာ အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Fabregas, Van Persi, Almunia တို့ကို ထုတ်မသုံးခဲ့ဖူး။ အရန်ဂိုးသမား Fabianski အထူးလက်စွမ်းပြကစားသွားတယ်။ တစ်ပွဲလုံးမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ left wing က ကစားသွားခဲ့တဲ့ မျက်နှာသစ်ကလေး Jack Wilshere ပါပဲ။ ၀ါရင့်ကစားသမားတစ်ဦးအလား အသင်းနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ကစားသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ (ဒုတိယပိုင်း တစ်ဝက်ကျော်မှာ သူ့ကိုထုတ်ပြီး Narsri ၀င်ကစားတာ) ဒီနေ့မှာ တလွဲတချော်တွေလုပ်တတ်တဲ့ Senderos လဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသွားခဲ့တယ်။ Denilson ရဲ့ ကစားပုံကိုတော့ သိပ်အားမရသေးဘူး။
ကွင်းလယ်မှာ Gebeto Silver, Flameni နဲ့ Hleb တို့ မရှိတော့ပေမဲ့ အခုဘောလုံးရာသီမှာ Ramsay နဲ့ Nasri တို့အနေနဲ့လည်း ကွင်းလယ် ဗိုလ်ချုပ်ကလေး Fabregas နဲ့ အတူ Arsenal ရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားကွက်မှာ အဆင့်မီ တွဲကစားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။ မကြာခင်မှာလဲ Rosicky လည်း ပြန်ကောင်းလာတော့မှာပဲ။ ဒီနေ့ ခြေစွမ်းအရ Wilshere ကို ဘယ်တောင်ပံမှာ လူစားအနေနဲ့ ကစားခိုင်းလို့ရနေပြီ။ ဒီရာသီမှာ ဒီကောင်လေး ကို လူငယ်အသင်းကနေ အသင်းကြီးကို ပြောင်းကစားခိုင်းမယ်ထင်တယ်။
Van Persi, Walcott, Bentner နဲ့ Carlos Vela တို့ ဘယ်လောက်အားကိုးရမယ်တော့မသိဘူး ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုး ကောင်းတစ်ယောက်လောက် လိုဦးမယ်ထင်တယ်။ Adebayer ကလည်း အသင်းပြောင်းခွင့်မရ၊ လခလည်း မတိုးတော့ ကပ်သီးကပ်ဖဲ့များလုပ်နေလားမသိဘူး လုံးဝကို ခြေမပေါ်ဘူး။
ဒီည Real နဲ့ကစားမဲ့ပွဲမှာ Winger အနေနဲ့ ဘယ်လို ပွဲထွက်လာဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ...
Posted by little moon at 8:49 AM No comments:
Posted by little moon at 4:16 PM No comments:
Maintaining the number 1 position is more difficult than acquiring it. Ana Ivanovic တစ်ယောက် Rogers Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Australia က ၁၇နှစ်အရွယ် Paszek ကို အသည်းအသန် ကစားပြီး ရှုံးနိမ့်သွားချိန်မှာပဲ no.2 Jankovic က ပြိုင်ဖက်ကို နှစ်ပွဲပြတ် straight set နဲ့ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Wimbledon 3rd round ကထွက်ခဲ့ရတဲ့ Ana တစ်ယောက် အခုပွဲမှာလည်း ထွက်လိုက်ရပြန်ပါပြီ။ ညာဖက်လက်မ နာနေလို့ raquet ကိ်ု ကောင်းကောင်းမကိုင်နိုင်လို့ မကစားနိုင်ခဲ့ဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Ana နဲ့ Jankovic က Sony WTA ranking မှာ အမှတ် ၈၀လောက်ပဲကွာပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Ana တစ်ယောက် ပြင်သစ် အိုးပင်းမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ လက်ရည်မျိုး ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ အနားယူသွားတဲ့ Justine Henin ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့လက်စွမ်းရယ် အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်း နိုင်မှုရယ်ကို Ana ရော Sharapova ပါ မမှီသေးပါဘူး။
တစ်ဖက်မှာလည်း အမျိုးသား No.1 Federer တစ်ယောက် ရှုံးပွဲတွေဆက်လို့ နံပါတ်တစ်နေရာကို Nadal က ခြိမ်းခြောက်နေပါပြီ။ Federer အနေနဲ့က ၂၀၀၄ကတည်းက ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Nadal က ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ နံပါတ် ၂ စဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လဲ Federer တစ်ယောက် နံပါတ်တစ်နေရာကို ထိန်းသိမ်းထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
တောင်တစ်တောင်ထက် နောက်တစ်တောင်ပိုမြင့်တယ်။ ရှေ့ကလှိုင်းလုံးကို နောက်လှိုင်းလုံးက လွှမ်းသွားတယ်။
ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲဘူး ..... Nothing lasts forever ပါပဲ။
Posted by little moon at 2:20 PM No comments: